पिरो खानु स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजनक ? - Mitho Khabar
January 26, 2020 mithokhabarLeaveaComment on पिरो खानु स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजनक ?
उनले जुन किसिमको खुर्सानी खाएका थिए । ३४ वर्षीया ती व्यक्तिले एउटा प्रतियोगितामा त्यो खुर्सानी खाने निर्णय गरेका थिए ।
मानिसलाई सबैभन्दा धेरै कुन खुर्सानी मीठो लाग्यो भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । जसको जवाफमा सबैभन्दा धेरै पिरो भएको खुर्सानी नै मीठो लाग्यो भन्ने पाइयो । रोजिनका अनुसार मानिसमात्र एउट त्यस्तो प्रजाति हो । जसलाई नकारात्मक घटनाहरु पनि रोमाञ्चक लाग्छ । बिबिसीबाट